JW Ịkpọ Ndị Mmadụ Òkù Maka Mgbakọ Ukwu nke Afọ 2016
N’afọ ọ bụla, anyị na-achọsi ike ka mgbakọ ukwu ruwe eruwe n’ihi na anyị na-amụta ọtụtụ ihe na ya. Anyị kwesịkwara ịgba mbọ kpọọ ndị ọzọ ka ha bịa soro anyị mụta ihe ndị ga-enyere ha aka. (Ọma 34:8) Ndị okenye ọgbakọ ọ bụla ga-ekpebi otú kacha mma a ga-esi enye ndị niile nọ́ n’ókèala ha akwụkwọ ịkpọ òkù.
Olee mgbe ọgbakọ anyị ga-aga mgbakọ ukwu?
Olee mgbe anyị ga-amalite ịkpọ ndị mmadụ òkù?
Olee ụbọchị ndị ọgbakọ anyị ji aga ozi ọma?
Olee ụbọchị ndị m ga-eso aga ịkpọ ndị mmadụ òkù?
Olee ndị m ga-akpọ òkù?
IHE Ị GA-EKWU
I kelechaa onye ị gara na nke ya, gị asị ya:
“Anyị na-akpọ ndị mmadụ òkù ka ha bịa mgbakọ ukwu anyị ga-enwe. E dere ụbọchị anyị ga-aga ya, oge anyị ga-eji malite, na ebe a ga-enwe ya n’akwụkwọ a. Ọ ga-amasị anyị ka ị bịa.”
OTÚ Ị GA-ESI NYEKWUORO ONYE NWERE MMASỊ AKA
Anyị ga-agbalị ka anyị kpọọ ndị niile nọ́ n’ókèala anyị òkù. Anyị kwesịkwara ịgba mbọ chọpụta ndị nke nwere mmasị ma nyekwuoro ha aka.
Anyị nwere ike inyekọta mmadụ magazin na akwụkwọ ịkpọ òkù na Satọdee na Sọnde.
mailto:?body=Ịkpọ Ndị Mmadụ Òkù Maka Mgbakọ Ukwu%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D202016131%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ịkpọ Ndị Mmadụ Òkù Maka Mgbakọ Ukwu
Mgbakọ Ukwu “Guzosie Ike n’Ebe Jehova Nọ”